Meicet |China Microdermabrasion Machine Manufacturing sy Factory
Asa:Manandratra, Manenjana, Manadio
Hery:65W, 50Hz, 110~240VAC
Temperature miasa:15~35 ℃
Temperature fitehirizana:5-40 ℃
Ny Backin dia fitaovana fitantanana hoditra matihanina sy feno.Izy io dia manambatra singa miasa isan-karazany ary azo ampiasaina amin'ny tetikasa fitantanana hoditra isan-karazany.Ny tena fiasan'ny fitaovana dia ny fanadiovana ny tarehy sy ny moisturizing, manampy amin'ny fampidirana ny vokatra, manatsara ny fandevonan-kanina ny serum, ary manatsara metabolism hoditra, sns.
BACKIN Microdermabrasion Machinetombony
· Tantana 9 miasa
· Ecran Touch 10.2 santimetatra
· Fiteny maro: Anglisy, Korea, Italiana, Sinoa
· Tsy misy fanjaitra
· Fiarovana ambony
· Fanaraha-maso mazava tsara
Ny fiteny, ny famirapiratana, ny feo dia azo amboarina amin'ny fametrahana interface.
3 Fiteny ho anao
Anglisy Koreana sy Sinoa
Tantana 10 — Fampiasa 10
Mifanaraka amin'ny pejy fampandehanana eo amin'ny milina ny tantana fiasa tsirairay.Ny haavon'ny angovo, ny fotoana ary ny maody dia azo apetraka mivantana ao amin'ny interface tsara.
Amin'ny fampiasana ny fitsipiky ny vibration avo lenta, ny rano dia atomized rehefa manala ny loto ao amin'ny hoditra, mba hahazoana vokatra fanadiovana.
Ny "Ion Clip" dia miasa amin'ny maso sy faritra kely hafa.Ampiasao ny micro-current hanentanana ny hoditra;manampy ny fampidirana ny Whitening vokatra fikarakarana hoditra, ary manao ny absorption haingana kokoa.
Rehefa miasa ion clip, ion-roller, dia mila mampifandray ny mena tariby amin'ny ion tahony, ary ny mainty tariby ity ratsy tehina, ary ny ratsy tapa-kazo dia tokony hotazonin'ny mpanjifa.
Amin'ny fampiasana ny fitsipiky ny onjam-peo mba hanafanana ny maso na ny tavan'ny tarehy amin'ny sosona raikitra, avy eo ny collagen subcutaneous dia azo fehezina sy henjana, mba hahatratrarana ny vokatry ny fanalefahana ny ketrona.
MAFY & MAFY
Ny fampiasana ny fiasan'ny hatsiaka/hafanana ara-batana amin'ny hoditra dia afaka manampy amin'ny fampidiran-dra, mampitombo ny metabolisma ary manatsara ny fahombiazan'ny fitsaboana.
Ny "Ion Roller" dia miasa amin'ny faritry ny tarehy.Ampiasao ny micro-current hanentanana ny hoditra;manampy ny fampidirana ny Whitening vokatra fikarakarana hoditra, ary manao ny absorption haingana kokoa.
Mampiasà fanerena mba hitifitra ny molekiola na ny otrikaina amin'ny rano atao atomika mitovy amin'ny faritra miasa, mba ho mora kokoa amin'ny hoditra ny mameno ny hamandoana na mandray otrikaina.
Amin'ny fampiasana ny fitsipiky ny vibration avo lenta, ny singa mahavelona miaraka amin'ny molekiola lehibe kokoa dia azo atao kely kokoa, noho izany dia azo hatsaraina ny hery miditra sy ny fahombiazan'ny absorption.Io fiasa io dia miasa indrindra amin'ny faritra manodidina ny maso.
Ny singa mahavelona amin'ny saron-tava dia azo ampidirina haingana ao anatin'ny hoditra ao anatin'ny 15 minitra amin'ny fampiasana ny microcurrent biolojika.Ny microcurrent 1mA dia hiparitaka amin'ny vatan'ny vatana manontolo.
Amin'ny fampiasana ny fitsipiky ny vibration avo lenta, ny singa mahavelona miaraka amin'ny molekiola lehibe kokoa dia azo atao kely kokoa, noho izany dia azo hatsaraina ny hery miditra sy ny fahombiazan'ny absorption.Io asa io no tena miasa amin'ny tarehy.
1. Afaka manampy amin'ny fanavaozana ny rafitra sy ny fanatsarana ny fampiasana vokatra avy lavitra izahay.
2. Manome anao antoka 12 volana izahay.Raha toa ka misy fanoloana kojakoja ilaina dia handefasanay anao avy hatrany, maimaimpoana.
3. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fandravana nataon'olombelona.
teo aloha: 10-in-1 Multifunction Cleansing Beauty Equipment Meicet Backin Model
Manaraka: 10-in-1 Microdermabrasion Machine Meicet Backin Beauty Machine
Fizarana Microneedle RF milina manandratra hoditra
Microcrystal RF Fractional milina
Multifunction Facial Beauty Fitaovana milina
milina fikarakarana hoditra multifunction
3D Skin Analysis Machine Facial Skin Analyzer F...